ရန်ကုန်မှာ OIC ရုံးမစိုက်ရေးအတွက် လူအင်အား ၁၀၀၀နီးပါး ဆန္ဒထုတ်ဖော
ပခုက္ကူမြို့ OIC ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ
အလုပ်ရမည်ဆို၍ လိုက်သွားသူ ရွာသား ၆၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ
အလိုမတူဘဲ သားမယား ပြုကျင့်သူ ဖမ်းမိ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းဖို့ – မောင်ရေစက်
HIV/AIDS လူနာအခမဲ့ တည်းခိုဆောင် မြေအငှား မြို့တော်စည်ပင် ချမပေး
ပဲခူးတွင်OIC အဖွဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်
မန္တလေးတွင် မီတာ လျှောက်ထားမှု ငါးရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်
ယနေ့လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မန္တလေးအိုးဘိုထောင်မှ မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင် ဗုံးခွဲခဲ့သူ ငါးဦး
ဒဏ်ရာရရှိသည့် လက်ပံတောင်းဒေသခံများ မန္တလေးဆေးရုံသို့ ထွက်ခွာ
ရခိုင်ရောက် OICကို ဒေသခံ ၈၀,၀၀၀ ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ရေ​ဆိုး​သန့်​စင်​မှု ​မ​လုပ်​သည့် ​စက်​ရုံ​များ​ကို ​အ​ရေး​ယူ​မည်
ဦးနေဝင်းမြေးများဖြစ်တဲ့ အေးနေဝင်းနှင့် ကျော်နေဝင်းတို့ ဒီနေ့ အင်းစိန်ထောင် ကလွတ် (ဓါတ်ပုံ)
ငွေစက္ကူများတွင် ပါဝင်သော ခြင်္သေ့ပုံ ပါတီတံဆိပ်ဖြစ်နေဟု လွှတ်တော်အတွင်း ဦးသိန်းညွန့်ပြောခြင်း ဗဟိုဘဏ်ငြင်း
ကျေးရွာလူထုထံမှ ကောက်ခံရရှိငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တင်
ထောင်​ တွင်း​အ​တွေ့​အ​ကြုံ ​ဒေါ်​နော်​အုန်း​လှ​ကို ​မေး​မြန်း​ချက်
လက်​ပံ​တောင်း ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ ၇ ​ဦး ​ဒဏ်​ရာ​ရ၊ ၃ ​ဦး ​ဖမ်း​ဆီး​ခံ​ရ
လှိုင်သာယာတည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ နှင့် လူတစ်ဦး ဖမ်းမိ
YouTube ကိုအင်တာနက်မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက စစ်ဦးစီးချုပ်အပါအ၀င် ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးအပြောင်းအလဲလုပ်
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေရှိ မြေယာများ ရောင်းမှား၊ ၀ယ်မှားမဖြစ်ရန် သတိပြုသင်
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဒေသများတွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ လုပ်ကိုင်သည့် ဟိုတယ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အရေးယူမည်
နေပြည်တော် အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည်
Posted: 15 Nov 2013 07:01 AM PST
ရှရီရာဥပဒေ(အစ္စလာမ်မစ်ဥပဒေ)ကို တပြေးညီ လိုက်နာသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၅၇နိုင်ငံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား
သော အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရုံးအခြေ မစိုက်
နိုင်ရေးအတွက် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့က ကြေးသွန်း ဘုရားကြီးရှေ့မှ ဆူးလေဘုရားရှေ့သို့ လူအင်အား ၁၀၀၀ နီးပါးခန့်ဖြင့် ယနေ့ နေ့လယ် ၂နာရီအချိန်ခန့်က ဆန္ဒဖော် ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ OIC ဆန့်ကျင်ရေး လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ရဟန်းသံဃာ ၂၅၀ကျော်နှင့် လူထုအင်အား ၅၀၀ကျော်ခန့် တို့က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ် ပြီး၊ ---
Posted: 15 Nov 2013 06:54 AM PST
ခြေချောင်းလေးများ ခိုက်မိပြီး ရောင်ရမ်းသည်ကို တရုတ် တိုင်းရင်းဆေး ဆရာဖြင့် ပြသခဲ့ရာ ဆေးမှားယွင်း ကုသခဲ့သဖြင့် ခြေချောင်း နှစ်ချောင်း ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရသည့် အတွက်ဟု ဆိုကာ ဆေးကုပေးခဲ့သည့် တရုတ် တိုင်းရင်းဆေးခန်းကို အရေးယူပေးရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ သို့ တိုင်ကြားထားကြောင်း အဆိုပါ ခြေချောင်းများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သူ ဒေါ်စန်းစန်းအေးက ပြောကြားသည်။ ---
Posted: 15 Nov 2013 06:17 AM PST
၁၅ . ၁၁ . ၂၀၁၃ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ပခုက္ကူမြို့တွင် OIC ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကို ယနေ့ ညနေ ၃း၃၀ အချိန်တွင် ပြုလုပ်ပြီး ဖေါင်းတော်ဦးဘုရားအတွင်း ဆရာတော် သံဃာတော်များမှ OIC ကို ရုံစိုက်ခြင်း လက်မခံခြင်းများ ပခုက္ကူသံဃာတော်၏ သဘောထားများ ထုတ်ပြန်ခြင်းကို သံဃာလူထူ ၅၀၀ ကျော်တက်ရောက်ကျပါသည် ။
ပခုက္ကူသံဃာထူ၏ OIC အပေါ်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် …….
၁ ။ ပခုက္ကူသံဃာအနေ့နှင့် ဘင်္ဂါလီကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်မခံ ။
၂ ။ ပခုက္ကူသံဃာအနေ့နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်မခံ ။
၃ ။ဘင်္ဂါလီများကို အကာအကွယ်ပေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကို
လက်မခံ ကန်ကွက်သည် ။
၄ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်နေရာဒေသမဆို OIC အဖွဲ့ရုံးဆိုက်ခွင့်နှင့် OIC အဖွဲ့နှင့်
ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မူမှန်သမျှာ့ကို ကန့်ကွက်သည် ။
၅ ။ မသမာသောနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀င်ရောက်နေသော ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များ မြန်မာ
နိုင်ငံမှ အခုထွက်သွား ။
ဟုသော သဘောထားထုတ်ပြန်ကာ သံဃာလူထူပရိတ်သက်များ ကြွေးကြော်
ကာ အခမ်းအနားကို ညနေ ၅ နာရီတွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည် ။
Posted: 15 Nov 2013 02:45 AM PST
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဓနုဖြူ မြို့နယ် ကုန်းတန်းတောင်ကျေးရွာမှ ရွာသား ၆၀ ကျော်တို့အား တစ်ရွာတည်းနေသူတစ်ဦးက အလုပ်ရမည်ဟုဆိုကာ တစ်အိမ်တက်ဆင်း စည်းရုံးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ယခုအချိန်ထိ အဆက်အသွယ်မရရှိဘဲ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းလိုက်ပါသွားသူများ၏ မိသားစုဝင်များထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ရွာသား ၆၀ ကျော်အား ပင်လယ်ဝအနီးရှိ ချောင်းဝရွာတွင် ရေလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးစရိတ်ငြိမ်း တစ်လလျှင် ငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ ရမည်၊ ကြိုတင်ငွေ ထုတ်ယူလိုပါက လည်းတစ် လစာထုတ်ပေးမည်၊ ---
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ရေတာရှည်မြို့နယ် ကျွဲရိုင်းပြင် ကျေးရွာအုပ်စု စစ်တောင်းမြစ် တစ်ဖက်ကမ်း ဘိုတဲစုတွင် မိဘများ တောင်ယာ အလုပ်သွားနေခိုက် တဲတွင် မိန်းကလေး တစ်ဦးတည်း ရှိနေစဉ် တစ်ရွာ တည်းနေသူက အနီး ကြံခင်းထဲ ဆွဲခေါ်ကာ အလိုမတူဘဲ သားမယား ပြုကျင့်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက တောင်ယာလုပ်ကိုင်ရင်း ဘိုတဲစုတွင် မ....၁၄ နှစ်သည် မိဘများ အလုပ်သွားနေစဉ် တဲတွင် တစ်ဦးတည်း ရှိနေခိုက် တစ်ရွာတည်းနေ သန်းဝင်း ၄ဝ နှစ် ရောက်ရှိ လာပြီး မ....အား လိုက်ခဲ့ရန် ပြောရာ မ....က မလိုက်နိုင်ဟု ပြန်ပြောခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် သန်းဝင်းက မ....၏ လက်ကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီး တဲအနောက်ဘက် ကြံခင်းထဲအရောက် တွန်းလှဲကာ သားမယား အဖြစ် တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့သည်။ ---
Posted: 15 Nov 2013 02:23 AM PST
ပြည်ထောင်စု ရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ အခမ်းအနားသို့ တက်လာခဲ့ရုံ မျှမက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အစိုးရသမ်္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ တိုင်းခန်းလှည့်လည်မှုများနောက်သို့ လိုက်ပါ၍ သွားလာနေသည်မှာ ယခင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးဘဌေး၏ အာဏာရ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီတို့ အပေါ် မှန်တမ်းမျှသာ ဆက်ဆံခဲ့ပုံနှင့် များစွာကွာခြားနေပေတော့သည် . . .
Posted: 15 Nov 2013 02:13 AM PST
ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် HIV/AIDS လူနာများ အခမဲ့ တည်းခိုဆောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ရန် မြေအငှား ချပေးရန် အတွက် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြခဲ့ရာ အဆိုပါ မြေနေရာသည် စီမံကိန်းဖြစ်၍ ချမပေးခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ဆည်းဆာရောင်ခြည် HIV/AIDS အခမဲ့ တည်းခိုဆောင်၏ တာဝန်ခံ ကိုကျော်နိုင်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ ဆည်းဆာရောင်ခြည် HIV/AIDS အခမဲ့ တည်းခိုဆောင်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ စတင်၍ (အမှတ် ၁၀(က) မေတ္တာ ၂လမ်း၊ မေတ္တာပန်းခြံ ၈ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာတွင်) ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဆေးကုသရန် ရောက်ရှိလာသည့် လူနာများအတွက် ရည်ရွယ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ---
Posted: 15 Nov 2013 01:56 AM PST
ပဲခူးမြို့၊ ဇိုင်းဂနိုင်း တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ၀င်္ဂဘာလမ်းရှိ ချမ်းမြေ့ဇေယျာသာမဏေကျော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တဥက္ကံသလင်္ကာရ ဦးဆောင်၍ ပဲခူးမြို့ရှိ အောင်ဇေယျကျောင်း၊သာ
သနာ မဏ္ဍိုင်ပါဌိတက္ကသိုလ် ကျောင်းတိုက်၊ သီတဂူကျောင်းတိုက်၊ ဓမ္မာလင်္ကာရ ကျောင်းတိုက်တို့မှသံဃာတော်များနှင့်မြို့နေပြည်သူများ စုစုပေါင်းအင်အား (၈၀၀)ခန့်သည်(၁၅.၁၁.၂၀၁၃)နေ့ နေ့လည်(၁း၀၀)အချိန်ခန့်တွင် OIC အဖွဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ် ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြ သူများသည် ချမ်းမြေ့ဇေယျာကျောင်းတိုက်မှ ပဲခူးပင်စည်ဈေးအထိ ရန်ကုန်-မန္တလေး မင်းလမ်းအတိုင်း ပိုစတာဆိုင်းဘုတ်များကိုင်ဆောင်၍ စီတန်းလှည့်လည်ပြီး OICအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ OICအလိုမရှိ၊ ခိုးဝင်ဘဂါင်္လီများ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများမှ အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပါဟု ကြွေးကြော်သံများနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာ ညနေ(၃း၀၀)အချိန်ခန့်တွင် ပြီးဆုံးသွားပြီး သက်ဆိုင်ရာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများသို့အသီးသီး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွား ပါသည်။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ အိမ်သုံးမီတာ လျှောက်ထားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး စက်ရုံသုံး ပါဝါမီတာ လျှောက်ထားမှု များကို ငါးရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ “အရင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် ချထားပေးဖို့ နေပြည်တော်ကနေ တိုက်ရိုက် ညွန်ကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ---
ယနေ့လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် မန္တလေးအိုးဘိုထောင်မှ ၁၀ ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရာ
နေပြည်တော်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့များတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကျော်မှ တစ်နေ့ထဲ ဗုံးသုံးနေရာပေါက်ကွဲရာတွင် ပါဝင်သည့်တရားခံများသည် အမိန့်ချပြီး လေးလအတွင်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြောင်းသိရသည်။ ၄င်းတို့ငါးဦးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀နှစ်နှင့် အများဆုံး ၁၂ခွဲအထိ တရားရုံးမှ အမိန့်များချမှတ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့တွင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တရားရုံးမှ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ---
မန္တလေးအိုးဘိုထောင်မှ ၁၀ ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်
Posted: 15 Nov 2013 01:19 AM PST
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်က ဒေသခံများနှင့် ရဲများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော ဒေသခံခုနှစ်ဦးကို လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဆေးကုသရန် မန္တလေးမြို့ဆေးရုံသို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက် နေ့လည် ၁နာရီခွဲခန့်တွင် ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက် ပဋိပက္ခကြောင့် ဒေသခံရွာသားများလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး ရွာသား ၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး ၂ဦးမှာ စိုးရိမ်ရကြောင်း ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ရောက်ရှိနေသော လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဦးဆောင်လုပ်ရှားသည့် ဆရာတော် ဦးဝိမလက မဇ္ဈိမသို့ မိန့်ကြားသည်။ ---
သေနတ်ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့သည့်သူများ။ ဓါတ်ပုံ - ကိုဟန်ဝင်းအောင်
Posted: 15 Nov 2013 01:12 AM PST
အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OICသည် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်က သွားရောက်ချိန်တွင် ရခိုင်ဒေသခံ သံဃာနှင့် လူဦးရေ ၈၀,၀၀၀ခန့်က စစ်တွေလေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်ဟု ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဦးမောင်နုက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ OICအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေသို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက် နံနက် ၁၀နာရီ ၄၅မိန်စ်ခန့်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်တွေတွင် တစ်နာရီခန့်အကြာ လေ့လာခဲ့ကာ မောင်တောသို့ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။ ---
Posted: 15 Nov 2013 01:08 AM PST
​ရန်​ကုန်​မြို့​တော် ​စည်​ပင်​သာ​ရေး​ကော်​မ​တီ​ဟာ ​ရေ​ဆိုး ​သန့်​စင် ​စွန့်​ထုတ်​ခြင်း ​မ​ရှိ​တဲ့ ​စက်​ရုံ ၈၀ ​နီး​ပါး​ကို ​စစ်​ဆေး ​တွေ့​ရှိ​ထား​ပြီး ​အ​ခု​နှစ်​ကုန်​သည်​အ​ထိ ​ရေ​ဆိုး​သန့်​စင်​မှု​လုပ်​ငန်း​တွေ ​လုပ်​ဆောင်​ခြင်း ​မ​ရှိ​ဘူး​ဆို​ရင် ​နှစ်​ဆန်း​တာ​နဲ့ ​စက်​ရုံ​ပိတ်​သိမ်း​သည်​အ​ထိ ​အ​ရေး​ယူ​မယ်​လို့ ​သန့်​ရှင်း​ရေး​နဲ့ ​သ​ဘာဝ​ပတ်ဝန်း​ကျင်​ရေး​ရာ ​ဌာ​န​မှူး ​ဦး​သန်း​လွင်​ဦး​က ​ပြော​ပါ​တယ်။
ရန်​ကုန်​မြို့​က ​စက်​မှု​ဇုန် ၂၄ ​ခု​က ​စက်​ရုံ​ပေါင်း ၃ ​ထောင်​ကျော်​ကို ​စစ်​ဆေး​ခဲ့​ရာ​မှာ ​အဲ​ဒီ​စက်​ရုံ ၈၀ ​နီး​ပါး​မှာ ​ရေ​ဆိုး ​သန့်​စင် ​စွန့်​ထုတ်​တဲ့​စ​နစ် ​လုပ်​ကိုင်​မ​ထား​တာ ​တွေ့​ခဲ့​ရ​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​ဒီ​စက်​ရုံ​တွေ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​လို့ ​သ​တိ​ပေး​မှု​တွေ ​ပြု​လုပ်​ခဲ့​ပြီး ​စက်​ရုံ​တ​ချို့​က​တော့ ​ရေ​ဆိုး​သန့်​စင် ​စ​နစ်​တွေ ​အ​ကောင်​အ​ထည်​ဖော်​နေ​ပြီ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​ကြောင်း ​အ​ကြောင်း​ကြား​လာ​တယ်​လို့ ​ဦး​သိန်း​လွင်​ဦး​က ​ပြော​ပြ​ပါ​တယ်။
Posted: 15 Nov 2013 01:05 AM PST
နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဖြင့် သေဒဏ်ကျခံနေရပြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ ယနေ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏ မြေး ၂ ဦးဖြစ်သော ကျော်နေ၀င်း နှင့် အေးနေ၀င်း
Photo; Khin Mg Win Ap
Posted: 15 Nov 2013 12:45 AM PST
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က နိုင်ငံတော်သုံး ငွေစက္ကူများ၌ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံဖြင့် ရိုက်နှိပ် အသုံးပြုရန် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၌အဆို တင်သွင်းခဲ့ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံသုံး ငွေစက္ကူများတွင် ပါဝင်သော ခြင်္သေ့ပုံ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခု၏ အမှတ် တံဆိပ် ဖြစ်နေေ ကြာင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားမှုကို ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။ ---
Posted: 15 Nov 2013 12:38 AM PST
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ကျုံတာ ရှမ်းကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံတာကျေးရွာ၊ အရှေ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အနီး မြေကွက်လပ်တွင် ယခင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဦးအေးပိုင်က တစ် အိမ်ထောင်လျှင် ငွေကျပ် (၁၀၀၀)စီ ခွဲ၍ အလှူခံပြီး (၁၆ x ၃၀)ပေ ခန့် ကျေးရွာ ပိုင် အဆောက်အအုံတွင် ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဆိုင်းဘုတ် တင်ထားသည်ဟု ယင်းဒေသခံများက ပြောသည်။ ---
နိုင်​ငံ​တော် ​အ​ကြည်​ညို​ပျက်​စေ​မှု ​ပုဒ်​မ ၅၀၅ (​ခ)​နဲ့ ​ပြီး​ခဲ့​တဲ့ ​ဩ​ဂုတ် ၂၉ ​ရက်​နေ့​က ​ထောင်​ဒဏ်​ချ ​မှတ်​ခံ​ရ​တဲ့ ​အ​မျိုး​သ​မီး​ကွန်​ရက်​အ​ဖွဲ့​၀င် ​နော်​အုန်း​လှ​ဟာ ​သ​မ္မ​တ​ရဲ့ ​လွတ်​ငြိမ်း​ချမ်​သား​ခွင့်​နဲ့ ​မ​န္တ​လေး​ထောင်​က​နေ ​ဒီ​နေ့ ​ပြန်​လွတ်​မြောက်​လာ​ပါ​တယ်။
ထောင်​တွင်း​အ​တွေ့​ကြုံ​တွေ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​ပြီး ​နော်​အုန်း​လှ​ကို ​ဆက်​သွယ်​မေး​မြန်း​ထား​ပါ​တယ်။ by ဒီဗွီဘီ
Posted: 15 Nov 2013 12:10 AM PST
စစ်​ကိုင်း​တိုင်း ​မုံ​ရွာ​ခ​ရိုင် ​လက်​ပံ​တောင်း​ဒေ​သ ​မိုး​ကြိုး​ပြင်​တောင်​ရွာ​မှာ ​မ​နေ့​ည​က ​ရဲ​နဲ့ ​ဒေ​သ​ခံ​တွေ ​နှစ်​ဖက် ​အ​ချင်း​များ ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​ဖြစ်​ပွား​ရာ​က​နေ ​ပစ်​ခတ်​မှု ​ဖြစ်​ပွား​ခဲ့​ပြီး ​ရဲ​တွေ​က ​ရွာ​သား ၃ ​ယောက်​ကို ​ဖမ်း​ဆီ​ခေါ်​သွား​ပါ​တယ်။ ပစ်​ခတ်​မှု​ကြောင့် ​ရွာ​သား ၇ ​ဦး ​ထိ​ခိုက် ​ဒဏ်​ရာ​ရ​ရှိ​တယ်​လို့​ ​မိုး​ကြိုး​ပြင်​ရွာ​နေ ​ဦး​လ​ပြ​ည့်​က ​ပြော​ပါ​တယ်။ ---
မရမ်းကုန်း မြို့နယ်တွင် ဆောက်လုပ်ဆဲကန် ထရိုက်တိုက်၏အုတ်ချပ်များပြိုကျ သည့်အတွက် နံဘေးရှိနှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ်ပျက်စီးကာ လူ တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် ညနေ ၆နာရီခန့်က မြို့သစ်(၄)လမ်း အိမ် အမှတ် (၁၅၁) ဆောက်လုပ်ဆဲ ကန်ထရိုက်တိုက်၏ အမြင့်ဆုံး ငါးလွှာမှ တိုက်နံရံအုတ်ချပ်များ သည် နံဘေးရှိအိမ်အမှတ် (ခ/၁၅၀) နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်ပေါ်သို့ ပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြိုကျသည့် ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပျဉ်ထောင်အိမ် တွင်နေထိုင်သော အသက်၂၄နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိ ခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အိမ်အမိုး အရှေ့ဘက်ခြမ်း ပျက်စီးယိုယွင်း ခဲ့ကြောင်း ပျဉ်ထောင်အိမ်၏ အိမ် ရှင်ဖြစ်သူက ရန်ကုန်တိုင်းမ်နေ့ စဉ်သတင်းစာသို့ပြောသည်။ ---
Posted: 14 Nov 2013 11:57 PM PST
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသသကြီး လှိုင်သာယာ မြို့နယ်အတွင်း ပဒန်ကျေးရွာ Sky တည်းခိုခန်း၌ တည်းခိုနေ ထိုင်သူတစ်ဦးကို လက်လုပ်ဖောက် ခွဲရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ နိုဝင် ဘာ ၁၃ရက်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း လှိုင်သာယာ မြို့ နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသူသည် ရခိုင် ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ရှိ ကျောက်ရစ်ကေရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ အသက် ၃၄နှစ်အရွယ် ရှိဦးတင်မောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်း တည်းခိုနေထိုင်သည့်အခန်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့ မှဝင် ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ် တွင် ၎င်းနှင့်အတူတည်းခိုနေထိုင် သူတစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားခဲ့ကြောင်း လှိုင်သာယာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ် ဦးက ဆိုသည်။ ---
Posted: 14 Nov 2013 11:39 PM PST
ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ တေးဂီတအစီအစဉ်များနှင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ သုံးစွဲသူများ Video Clip ပေါင်းများစွာကို စုစည်းထားသော YouTube ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အင်တာနက်နှင့် အွန်လိုင်းရရှိသောနေရာများတွင် သာ သုံးစွဲနိုင်နေရာမှ ယခုအခါ အင်တာနက် မလိုအပ်ဘဲ အော့ဖ်လိုင်း (Offline) သုံးစွဲနိုင်စေရန် စီစဉ် လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါအင်တာနက်မလိုအပ်ဘဲ ကြည့်ရှုစေနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် သုံးစွဲသူသည် ၄၈ နာရီကြာ လွှင့်ထုတ် မှုများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ---
Posted: 14 Nov 2013 11:20 PM PST
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အရေးပေါ်ပထမဆုံး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာကို ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “အစည်းအဝေး ပထမနေ့မှာပဲ အဲဒီရာထူး အပြောင်းအလဲတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” မွန်ပြည်သစ်ပါတီ တပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဇာတာမာန်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ ---
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများရှိ ဇုန်သုံးဇုန်အနက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဇုန်တစ်ခုကိုသာ စိစစ်ပြီး အထိုက်အလျောက်ခွင့်ပြုပေးနေသဖြင့် ရောင်းမှား၊ ၀ယ်မှား မဖြစ်စေရန် သတိပြုသင့်သည်ဟု ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြောသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လာရောက်သည့် ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ မြောက်ဦး၊ သရေခေတ္တရာ၊ မင်းကွန်း စသည့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဇုန်များအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် လုပ်ငန်းရှင်များက မြေယာများ လိုက်လံဝယ်ယူမှုများရှိနေကာ မြေယာဈေးနှုန်း အလွန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ငွေထုပ်ပိုက် ၀ယ်ယူသူများရှိကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ---
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအ၀င်ဝမုခ်ဦး ဓာတ်ပုံ-ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ) - 7day Daily
Posted: 14 Nov 2013 11:13 PM PST
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများဆုံးသွားရောက်သည့် ပုဂံ၊ မြောက်ဦး၊ သရေခေတ္တရာနှင့် အင်းဝ အပါအ၀င် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဒေသများတွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ မတင်ပြဘဲ ဟိုတယ်နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်သည့် ကုမ္ပဏီများ ကို အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေအတွင်း ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာ၊ တည်းခိုရိပ်သာနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေနေရာများရှင်းလင်းခြင်း၊ ၀င်းခြံများကာရံခြင်း၊ ၀င်းခြံကာရံရန်တိုင်များ စိုက်ထူခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် အရေးယူမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ---
မြောက်ဦးမြို့ရှုခင်း ဓာတ်ပုံ - 7day Daily
Posted: 14 Nov 2013 11:09 PM PST
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီသည် နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိကွင်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထွဋ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။ “ဒေါ်စုက နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးတိုင်းက NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ဆုံပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအကြောင်း ရှင်းပြမယ်။ ပြီးရင် သဘောထား တောင်းခံမယ်” ဟု ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ဆိုသည်။ ---
Posted by lu bo at 12:17 AM